Tuesday January 21, 2020 - 11:38:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee mid kamida mas'uuliyiinta ugu sumcadda xun dowladda Sacuudiga islamarkaana ku lug leh dhaqan rogga ka socda dhulka Xarameynka ee Sacuudiga loo yaqaan.
Turki Aala Sheekh oo ah madaxa Hay'adda Damashlaynta Sacuudiga horayna usoo noqday wasiir ayaa loola cararay isbitaal kuyaal qaaradda Yurub kadib markii uu lasoo gudboonaaday xanuun aan lagaran waxa uu yahay.
Qoraal uu soo bandhigay bartiisa Twitterka ka hor intii aan dibadda loo qaadin ayuu ku sheegay in uu xanuunsanayo wuxuuna taageerayaashiisa iyo shacabka Sacuudiga ka dalbaday duco.
Mid kamida gacan yarayaashiisa ayaa warbaahinta u sheegay in Turki Aala Sheekh uu ka xanuunsanayo madaxa islamarkaana uu kasoo baxay nabar aan lagaran kaas oo sababay in qanjirraha uu ka bararo sidoo kale wuxuu ka xanuunsanayaa bowdyaha.
Dhaqaatiirtiisa caafimaadka ayaa ka gaabsaday in ay faah faahin ka bixiyaan xaaladda uu ku suganyahay, Khaalid Maqrashi oo kamid ah saxafiyiinta Sacuudiga si aad ahna ugu dhow Turki Ala Sheekha ayaa qoraal kooban oo uu kusoo qoray Facebook wuxuu ku yiri "Turki Aala Sheekh wuxuu idiin qabaa baahidii ugu darneed oo ah in aad usoo duceysaan".
Ninkan xanuunsanaya ayaa mas'uul ka ah in kumanaan kun oo fanaaniin fusaqo gaala ah ay gudaha ugalaan dhulka Xarameynka islamarkaana ay fasaad ku dhax faafiyaan bulshada muslimka ah, hay'adda uu ninkan madaxda ka yahay ayaa dumarka Sacuudiga ku dhiirri gelisay in ay isqaawiyaan guryahana kasoo baxaan.